Wasiirki hore ee ganacsiga Soomaaliya oo ku dhintay qarax ka dhacay Xamar Weyne [Sawiro]
Updated About:310 days ago 0
Saraakiisha xaga amaanka ee dowlada KMG Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in qaraxi barqadi maanta ka dhacay degmada Xamar Weyne uu ku dhintay wasiirki hore ee ganacsiga Maxamed Cabdi Ibrahim (Garweyne).
Qaraxi maanta oo ay kasoo baxayeen saacadihi lasoo dhaafay warar kala duwan ayaa warki ugu danbeeyey ee aan ka helnay saraakiisha dowlada uu xaqiijinayaa in qofka lala eegtay uu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Ibrahim oo ahaa shaqsi ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaaliyeed ee caanka ah iyo siyaasiyiinta qunyar socodka ah.
Warsame Joodax oo ah gudoomiye ku xigeenka xaga amaanka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey geerida wasiirka isaga oo sheegay in weerarkaasi uu dhaawac kasoo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa oo la socday gaariga.
Mr. Joodax ayaa sheegay in miinada lagu qarxiyey marxuumka ay u maleynayaan mid lagu xiray baabuurka ka hor inta uusan kasoo bixin gurigiisa, isaga oo intaasi ku daraan in ay arintaasi baari doonaan.
Garweyne ayaa ahaa wasiirki ganacsiga ee xukumadi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo marki xilka laga qaadayna waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho, sidoo kale wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanada ugu caansan dalka Soomaaliya isaga oo heystay darajada Dr.